ထိပ်တန်း 10 ကမ္ဘာ့လျှို့ဝှက်နေရာများ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > ထိပ်တန်း 10 ကမ္ဘာ့လျှို့ဝှက်နေရာများ
မြေအောက်ရေကန်များ, လျှို့ဝှက်ရေတံခွန်များ, ချွတ် -The- ရိုက်နှက် - လမ်းကြောင်းကို quaint မြို့များ, နှင့်လှပသောအမြင်များ, ကမ္ဘာကြီးသည်အံ့သြဖွယ်လျှို့ဝှက်နေရာများနှင့်ပြည့်နှက်နေသည်. ဒီထိပ်တန်း 10 ကမ္ဘာပေါ်ရှိလျှို့ဝှက်နေရာများကိုခရီးသွားများအတွက်အလွယ်တကူရရှိနိုင်သော်လည်းမကြာခဏလွဲချော်သည်. ဒါကြောင့်, ကမ္ဘာပေါ်ရှိလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်ဆုံးနှင့်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်အကောင်းဆုံးနေရာများသို့စိတ်ကြည်နူးဖွယ်ခရီးတစ်ခုအတွက်ပြင်ဆင်ပါ.
1. ဂျာမနီမှာထိပ်တန်းလျှို့ဝှက်ရာဌာန: Berchtesgaden
250 တောင်တက်လမ်းကြောင်း၏ကီလိုမီတာ, ယူနန်ပြည်နယ်ရဲ့ရေကန်, နှင့်အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ထိပ်, Berchtesgaden အမျိုးသားဥယျာဉ် ဂျာမနီရှိထိပ်တန်းလျှို့ဝှက်နေရာများတစ်ခုဖြစ်သည်.
ဤသည်အမျိုးသားဥယျာဉ်ညာဘက်Austriaစတြီးယားနှင့်အတူဂျာမနီရဲ့နယ်စပ်မှဖြစ်ပြီး Bavaria အတွက်အလှဆုံးရှုခင်းများနေရာဖြစ်သည်. အများဆုံးခရီးသွား the ည့်နေစဉ်ခရီးသွားလာနေစဉ် Black ကသစ်တော, ဆွစ်ဇာလန်အဲလ်ပ်တောင်တန်း, သို့မဟုတ်ဥရောပ၏ဗဟို, ဒီအံ့သြဖွယ်အမျိုးသားဥယျာဉ်သတိမမူဖြစ်ပါတယ်. ဒါကြောင့်, သငျသညျအလွန်အနည်းငယ်ခရီးသွားများမှတစ် ဦး ဖြစ်နိုင်ပါတယ်, အားဖြင့်ပျော်ပွဲစားရှိသည် Konigssee ရေကန်, Watzmann မှထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုကြိုးစားကြည့်ပါ 2,713 for မီတာ ရင္သပ္ရႈေအမြင်ချင်း ချိုင့်၏, နှင့်ထိတွေ့မှုမရှိသောရိုင်းသဘာဝ.
Salzburg မှ Berchtesgaden သို့ရထားနှင့်အတူ
မြူးနစ် Berchtesgaden မှရထားနှင့်အတူ
Berztesgaden တစ်ရထားနှင့်အတူ Linz
Innsbruck သို့ Berchtesgaden သို့ရထားဖြင့်သွားသည်
2. အီတလီမှာအရှိဆုံးလျှို့ဝှက်ရာဌာန: Tropea ရှိ Santa Maria Dell Isola ၏ဘုန်းကြီးကျောင်း
Tropea ၏ရွှေကမ်းခြေများပေါ်တွင်နေပူနေသည့်ခရီးသွားအများစုသည်ဤလျှို့ဝှက်နေရာကိုမသိပါ. သို့သျောလညျး, ညာဘက်သူတို့ခေါင်းပေါ်အထက်, ကျောက်တောင်ထိပ်မှာထိုင်နေတယ်, Tyrrhenian ပင်လယ်ကဝိုင်းရံထားသည်, Santa Maria dell Isola ၏သန့်ရှင်းရာဌာနဖြစ်သည်.
အလယ်ခေတ်တွင်တစ်ချိန်ချိန်တွင်ဘင်နီဒစ်များသို့မဟုတ်ဘေလီယန်လူမျိုးများကဘုန်းကြီးကျောင်းကိုတည်ဆောက်ခဲ့ခြင်းရှိမရှိမသေချာပါ. ဒါကြောင့်, သငျသညျဘုန်းကြီးကျောင်းရဲ့ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသောမျက်နှာစာနောက်ကွယ်မှသမိုင်းနှင့်အလှအပရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်. သေချာပါတယ်, အသက်ရှင်ကျန်ရစ်တဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်း2မြေငလျင်များ, အကယ်စင်စစ် Calabria ၏အကောင်းဆုံးနှင့်စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးလျှို့ဝှက်ချက်များကိုထိန်းသိမ်းထားသည်.
Vibo Marina Tropea နှင့်အတူရထားတစ်စီး
ရထားနှင့်အတူ Tropea သို့ Catanzaro
Cosenza တစ် ဦး ကရထားနှင့်အတူ Tropea ရန်
ရထားနှင့်အတူ Tropea သို့ Lamezia Terme
3. ဆွစ်ဇာလန်တွင်အရှိဆုံးလျှို့ဝှက်ရာဌာန: Trummelbach ရေတံခွန်
၏ချိုင့်၌ 72 ရေတံခွန်များ, သင်မရှာဖွေရသေးရှိသေး၏ထင်ချင်ပါတယ် ဆွစ်ဇာလန်၌ရေတံခွန်, ဒါပေမယ့်အဲဒီမှာရှိပါတယ်. ဥရောပရှိထိပ်တန်းလျှို့ဝှက်နေရာများအနက်တစ်ခုမှာ Trummelbach Falls ဖြစ်သည်. ဒီအကွာအဝေး 10 ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်ရေခဲမြစ်ကျွေးသောရေတံခွန်များ, Eiger နှင့် Jungfrau မှရေအရည်ပျော်ခြင်းဖြင့်ကျွေးမွေးသည်.
ထိုကွောငျ့, တောင်ကိုသွားရောက်လည်ပတ်ခြင်းနှင့်လမ်းလျှောက်တဲ့အခါမှာ, ဤအလျှို့ဝှက်ရေတံခွန်များကိုနှစ်သက်, အေးခဲနေသောရေတံခွန်ယိုယွင်းခြင်းမှသင့်အားကာကွယ်ပေးမည့်အဝတ်အစားများဝတ်ဆင်ပါ.
4. Hinterbruhl ခုနှစ်တွင် Seegrotte, သြစတြီးယား
တစ်ဦးက လှေခရီးစဉ် သြစတြီးယား၏အကြီးဆုံးမြေအောက်အိုင်မှမမေ့နိုင်သောအတွေ့အကြုံကို. ဤကြီးမားလှသော Hinterbruhl မြို့ရှိ Grotte, ဂူတစ်ခုဖြစ်သည်, မူလကသတ္တုတွင်းရည်ရွယ်ချက်များအတွက်လူလုပ်, ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်း.
သို့သျောလညျး, ထိုအချိန်ကမြေအောက်အိုင်ကိုစွန့်ပစ်ခဲ့သည်. ယနေ့တွင်, Hinterbruhl အတွက် Seegrotte, ထိပ်တစ်ခုသို့အသွင်ပြောင်း 10 ကမ္ဘာကြီးကိုလည်ပတ်ရန်လျှို့ဝှက်နေရာများ.
5. တရုတ်နိုင်ငံ၏ထိပ်တန်းလျှို့ဝှက်ချက်နေရာ: စမ်းချောင်းတောင်
3 ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်မိုsumm်းတိမ်ကိုစီးတက်, Sanqing တောင်သည်တရုတ်ယဉ်ကျေးမှုတွင်အမြင့်မြတ်ဆုံးဖြစ်သည်. Sanqing တောင်၏ရှုခင်းသည်တရုတ်ရှုခင်း၏ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်အကောင်းဆုံးရှုထောင့်တစ်ခုမျှသာမဟုတ်ပါ, ဒါပေမယ့်လည်း Taoist ယုံကြည်ချက်အတွက်မြင့်မြတ်သောအဓိပ္ပာယ်ကိုနှင့်အတူ; အဆိုပါ3ထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုကိုယ်စားပြုသည်3စင်ကြယ်သောသူတို့သည်, အမြင့်ဆုံးသောဘုရားတို့၊.
Sanqing ဝန်းကျင်amazingရိယာသည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောရှုထောင့်များကိုလည်းပေးသည်, လမ်းကြောင်း, နှင့်မှရှာဖွေတွေ့ရှိရန်မှော်အချက်များ 10 areaရိယာထဲမှာအများဆုံးသာယာလှပအစက်အပြောက်. ထိုကွောငျ့, ကိုယ့်ကိုယ်ကို Sanqing တောင်သို့ ၂ ရက်ကြာခရီးသွားရောက်ပါ, ထို့ကြောင့်သင်လျှို့ဝှက်အစက်အပြောက်အားလုံးကိုအပြည့်အဝခံစားနိုင်ပြီးစူးစမ်းနိုင်သည်.
6. အီတလီမှာထိပ်တန်းလျှို့ဝှက်နေရာများ: နင်
Italian Alps ၏ဂုဏ်အသရေသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကောင်းဆုံးထိန်းသိမ်းထားသောလျှို့ဝှက်ချက်မဟုတ်ပါ. လူတိုင်းတောင်တန်းကိုသိကြသည်, ရှုခင်း, Alpine ရေကန်များ, နှင့်သာယာလှပသောမြက်ခင်း. သို့သျောလညျး, အီတလီ၏အရှေ့မြောက်ဘက်ရှိ Trentino, ရေကန် Garda နှင့် Dolomites အကြား, မကြာခဏဖို့လမ်းကြောင်းအပေါ်လွဲချော်နေသည် သဘာဝအံ့ဖွယ်အမှုများ ဒီနေရာမှာဖော်ပြခဲ့တဲ့. ဒီနေရာတွင်ထူးချွန်သောအရေအတွက်ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည် 297 ရှာဖွေတွေ့ရှိရန်ရေကန်များ.
ဖြည့်စွက်ကာ, ဒီမှာသာသင် Dolomites '' ထိပ်ပေါ်အထူးအလင်းအကျိုးသက်ရောက်မှု "alpenglow" လေးစားနိုင်ပါတယ်, နေဝင်ချိန်မှာ.
7. ပိုလန်တွင်ထိပ်တန်းလျှို့ဝှက်ရာဌာန: Szczecin ခုနှစ်တွင်ကောက်သစ်တော
ကို '30 ၌စိုက်၏, Szczecin သစ်တောသည်ကမ္ဘာ့လျှို့ဝှက်ဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်. ၎င်းသည်ပိုလန်နိုင်ငံတွင်သစ်တောများကိုသိုလှောင်ထားသည့်အကြောင်းရင်းကြောင့်ဖြစ်သည်, Gryfino မြို့အနီး. မှ 400 30 ရဲ့နောက်ကျောကိုစိုက်ထင်းရှူးပင်, ဒီနေ့သင်အနည်းငယ်ကျန်ခဲ့တာကိုတွေ့လိမ့်မယ်, နေဆဲအလည်အပတ်ခရီးလုံးဝတန်ဖိုးရှိဤအရပ်ဌာနကိုအောင်.
ထူးခြားသောပုံသဏ္forာန်အကြောင်းပြချက်သည်ယနေ့ထိတိုင်နက်နဲသောအရာဖြစ်ပေသည်; လူများစွာက၎င်းသည်လူလုပ်လုပ်သောသဘာဝလားသို့မဟုတ်အံ့ဖွယ်ကောင်းသောအံ့ဖွယ်တစ်ခုဟုတ်မဟုတ်တွက်ထုတ်ရန်ကြိုးစားခဲ့ကြသည်. ဒါကြောင့်, သင်သွားရောက်ကြည့်ရှုရန်ဆုံးဖြတ်လျှင်, ထင်းရှူးပင်၏လျှို့ဝှက်ချက်ကိုသင်လေ့လာနိုင်သည်’ ထူးခြားသောပုံသဏ္ဌာန်ထင်းရှူး, နှင့်တ ဦး တည်းစူးစမ်း ဥရောပရှိအလှဆုံးသစ်တောများ.
8. ဟန်ဂေရီမှာထိပ်တန်းလျှို့ဝှက်ရာဌာန: Tapolca
Tapolca ဟာဟန်ဂေရီနိုင်ငံကချစ်စရာကောင်းတဲ့မြို့လေးပါ, Baltan တောင်တန်းအနီးတွင်တည်ရှိသည် သဘာဝအရံ. ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားအများစုသည်ဘူဒါပက်တွင်အားလပ်ရက်ယူရန်ဟန်ဂေရီသို့သွားကြသည်, ဒါပေမယ့် Tapolca မြို့ဟန်ဂေရီရဲ့အကောင်းဆုံး - စောင့်ရှောက်လျှို့ဝှက်ချက်ဖြစ်ပါတယ်. ကြီးမားသောအမျိုးသားဥယျာဉ်နှင့်နီးစပ်မှုအပြင်, မြို့အလယ်မှာရေကန်တစ်ခုရှိတယ်, ချစ်စရာကောင်းတဲ့စတုရန်းနှင့်ပတ်ပတ်လည်ကဖေးနှင့်အတူ.
ထို့ကြောင့်, သင်ဟန်ဂေရီအစားအစာကိုမြည်းစမ်းချင်တယ်ဆိုရင်, လေးစားခြင်းနှင့်ဟန်ဂေရီရဲ့အံ့သြဖွယ်သဘာဝကိုရှာဖွေတွေ့ရှိ, နှင့်ရေကန်ဂူ, ထို့နောက် Tapolca သို့သင့်လက်မှတ်ကိုဘွတ်ကင်လုပ်ပါ.
9. အင်္ဂလန်မှာထိပ်တန်းလျှို့ဝှက်ရာဌာန: Hunstanton, -Norfolk
သင် Norfolk ရှိအပန်းဖြေစခန်း Hunstanton သို့လည်ပတ်သောအခါ, ပင်လယ်နားမှာတိတ်ဆိတ်တဲ့အားလပ်ရက်မြို့တစ်မြို့နဲ့တူလိမ့်မယ်. သို့သျောလညျး, သငျသညျကမ်းခြေနှင့်ကျောက်စရစ်ခဲကမ်းခြေကိုဆင်းလမ်းလျှောက်ပြီးနောက်, သငျသညျအရှိဆုံးအံ့မခန်းချောက်ထဲကိုတွေ့လိမ့်မည်. Hunstanton ကျောက်ဆောင်အဟောင်းများသည်ရောင်စုံသဲကျောက်အလွှာများဖြစ်သည်; သံချေးဂျင်းသဲကျောက်, အနီရောင်ထုံးကျောက်မြေဖြူတွေသုံးပြီးထိပ်ဆုံး, အစိမ်းရောင်ပင်လယ်ရေညှိနှင့်အပြာပင်လယ်နှင့်ဝိုင်းရံ.
ထိုကွောငျ့, အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ကမ်းခြေရှိ Hunstanton ကမ်းခြေသည်အလွန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသည်, အထူးသဖြင့်နေဝင်ချိန်မှာ. တစ်နေ့တာ၏ဤအချိန်တွင်, ချောက်ကမ်းပါးအရောင်များကိုပြောင်းလဲ, ပင်လယ်နှင့်ကမ်းပါးအကြားဆနျ့ကငျြဘမှာပို။ ပင်ထူးခြားတဲ့ဖြစ်ပါတယ်. ၎င်း၏သဘာဝအလှအပနေသော်လည်း, အရှေ့အင်္ဂလန်ရှိဤလျှို့ဝှက်နေရာကိုလူအများမသိပါ. ဒါကြောင့်, သင်၏ရထားလက်မှတ်ကို Hunstanton ကမ်းခြေများသို့စာရင်းသွင်းရန်ပိုလျင်မြန်သည်, ကမ္ဘာ၏ကျန်ထွက်ရှာမတိုင်မီ.
10. စကော့တလန်တွင် Applecross ကျွန်းဆွယ်
ဤသည်စကော့တလန်အံ့သြစရာကိုသာအတွက်လမ်းဖြင့်လက်လှမ်းလုပ်ခဲ့သည် 1975, ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်ရှိကျွန်းဆွယ်ကိုဖြတ်ကူးသည့်အကွေ့အကောက်များသောလမ်းများနှင့်အတူ. ဒါကြောင့်, သင်ဤဝေးလံခေါင်သီကျောက်မျက်သွားရောက်ချင်လျှင်, သင်တစ် ဦး တည်းလှေခရီးသွားလာအပေါ်မှီခိုခဲ့ရသည်, ဒီကျွန်းနေထိုင်သူများ၏ကျန်လိုပဲ.
Applecross သည်စကော့တလန်၏ကျွန်းဆွယ်ကမ်းခြေရှိလှပသောရွာလေးတစ်ခုဖြစ်သည်. သေးငယ်သောအခန်းငယ်များနှင့်အိမ်များသည်စိမ်းလန်းစိုပြေသောစိမ်းလန်းသောတောင်ကုန်းများပေါ်တွင်ပျံ့နှံ့သွားသည်, ပင်လယ်ကိုအပေါ်စီး, မင်းအသက်ရှူယူလိမ့်မယ်.
သာ 544 ဒေသခံများက, Applecross သို့သွားရန်အကြောင်းပြချက်အနည်းငယ်သာရှိသည်, ဒါပေမယ့်ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းနှင့်ပါအမြင်များ, လုံးဝကထိပ်တန်းတစ် ဦး အဖြစ်ကပွဲချင်းပြီးဝင်ငွေ 10 ကမ္ဘာပေါ်မှာလျှို့ဝှက်နေရာများ. ဖြည့်စွက်ကာ, Camusterrach နှင့် Ard-dhubh တို့သည်သင်၏စူးစမ်းရှာဖွေခြင်းကိုလက်မလွှတ်သင့်သည့်အခြားနေရာနှစ်ခုဖြစ်သည်, သူတို့လည်းအနိုင်နိုင်ခေတ်မီခြင်းဖြင့်ထိမိနေကြသည်အဖြစ်.
ဤတွင်မှာ တစ်ဦးကရထား Save, မမေ့နိုင်သောခရီးကိုစီစဉ်နိုင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ကူညီပေးပါမည် 10 ရထားဖြင့်ကမ္ဘာပေါ်ရှိလျှို့ဝှက်နေရာအများစုကို.
ငါတို့ရဲ့ blog post ကို“ Top 10 သင်၏ site ပေါ်သို့ကမ္ဘာ့လျှို့ဝှက်နေရာများ”? သင်ဟာတစ်ခုခုကိုလုပ်နိုင်အယူကျွန်ုပ်တို့၏ဓါတ်ပုံများနှင့်စာပေးပြီးခရက်ဒစ်နှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့ဒီဘလော့ပို့စ်. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fmy%2Fsecret-places-world%2F – (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
Hidden လမ်းညွှန်များ HiddenGems လျှို့ဝှက်ချက် လျှို့ဝှက်နေရာများ TopSecretplacesinEurope